Budata GR-BALL APK maka Android
Free Budata maka Android (15.00 MB)
GR-BALL bụ egwuregwu nka nke enwere ike ịkpọ na ekwentị Android na mbadamba.
GR-BALL, nke onye nrụpụta egwuregwu Turkey bụ Yako Software mere, bụ otu nime egwuregwu ndị dabere na ụdị egwuregwu anyị nwere ike ịkpọ kpochapụ. Nụdị egwuregwu a, nke anyị na-ahụkarị na NES na SNES, enwere obere ikpo okwu na ala ihuenyo ahụ ma anyị na-anwa ịtụba bọọlụ nọhịa nihu na ikpo okwu a. Otú ọ dị, ebumnobi anyị na GR-BALL abụghị ịfụ igbe dị nihu anyị; zipu bọọlụ gafee.
Site na ọnọdụ RESISTANCE, ị nwere ike ịkọrọ ndị enyi gị akara gị, yana ụdị CLASSIC na TIME TRIAL, nke na-abawanye ụdị egwuregwu dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu gị na ndị enyi gị ga-egwu wee na-asọrịta mpi, GR-BALL bụ otu nime egwuregwu kwesịrị ịnwale. Ị nwere ike nweta ozi zuru ezu gbasara egwuregwu ahụ site na ilele foto ndị dị nokpuru.
Mmepụta: Yako Software